Chọta India njem nleta | Top njem nleta na India
Nyochaa India - Njem India
India nke di egwu - ala di iche iche bu mba nke na-acho ndu. Okporo ámá na okporo ụzọ ọ bụla, mmanya na ihe ndị e ji eme ihe nwere ihe dị mkpa nke a na-apụghị ịhapụ. Ógbè India ọ bụla nwere ọdịbendị na omenala pụrụ iche nke na-enye mba ahụ siri ike mmụọ. Ndị ọgaranya dị iche iche nke India na-agbali ịdọta ndị na-eme nnyocha site na gburugburu ụwa. Uzo ugwu snow, ọdọ mmiri di iche iche na okpukpu uzo, ihe ndi mara mma, ebe ndi mmadu bu ihe ndi ozo di iche iche, ihe ndi ozo nwere ike iche na inwa India. A na-emepụta ntinye njem nlegharị anya nke India iji chọpụta ụdị dị iche iche.
Enwere ike iji nlezianya chọpụta ala ndị India.
North India: Dịka ebe njem, North India nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye, nke kwesịrị ekwesị site na ebe ndị ahụ mara mma na-aga n'ebe obibi okpukpe. N'ịbụ ndị e jupụtara na ụlọ nsọ oge ochie, ọdọ mmiri na-egbuke egbuke, ebe a na-echefu echefu, ebe mmiri dị egwu, North India na-emesi ndị ọbịa nleta egwu.
East India:Ala ikpe nke ọtụtụ alaeze emeri, East East nwere agbụrụ siri ike na agbụrụ okpukpe. Ebe ndị na-enweghị atụ na ụlọ nsọ ndị dị ebube, ebe ndị dị n'ugwu na ubi tii, ndụ ndụ ndị dị ndụ na ogige osisi ndị na-adịbeghị anya, iyi na ala ndị na-enweghị ntụpọ bụ ụzọ mgbapụ dị mma maka njem ndị njem ọkụ.
North East India:Obodo kachasi anya, ala dị omimi nke ugwu ugwu bụ ihe a na-ejighị n'aka ịga ebe obibi. Ọ bụ n'ezie eluigwe na-akọwaghị. A zoro ezo n'ugwu na-enweghị nsọpụrụ na ndagwurugwu nke Himalayas, North East India bụ nke kachasị nke a nyochaworo, ụwa ndị ọzọ na ebe dị elu n'etiti ebe ndị mara mma India.
West India:Ọgaranya n'akụkọ ihe mere eme, ọnọdụ ime mmụọ, ezi omenala na ọdịbendị, West India na-enye ụzọ dịgasị iche iche maka njem zuru oke ebe. Mpaghara a na-agụnye ọmarịcha okooko osisi, obi ụtọ ugwu ugwu, njem ndị njem na-abịa, ebe mara mma nke eze, ọdịbendị dị mma, ebe obibi ndị njem, akara ngosi na-enweghị atụ na ndụ na-adọrọ adọrọ.
South India:South India maara ihe niile onye nleta na-achọ. O nwere ọmarịcha ebe ndị mara mma, ugwu ụlọ, ebe ndị anụ ọhịa na-eme, akụkọ ihe mere eme nke oge ochie, ihe ndị na-egbuke egbuke, mmiri na-egbuke egbuke na ala ndị na-asọ oyi.
Central India:Central India, nke a maara maka ọdịiche dị iche iche dị iche iche, bụ ogige anụ ọhịa na ogige ntụrụndụ mba. E wezụga anụ ọhịa, o nwere nnukwu ụlọ na ebe ncheta, mpaghara agbụrụ, ebe ntụrụndụ dị oké ọnụ ahịa, na ebe ndị njem oge ochie; n'ezie Central India na-enye ndị ọbịa ya ihe nkiri dị iche iche.
Họrọ otu n'ime anyị India Tour nchịkọta ime ka ezumike gị bụrụ ihe a na-echefu echefu.
Njem Nlegharị Anya
Ntọala na njem
Ọdịda Anyanwụ East India
Ebe ndi njem India